युगसम्बाद साप्ताहिक - विदेश अध्ययन– प्रभावकारी नीति नियम आवश्यक
Tuesday, 01.28.2020, 09:46am (GMT+5.5) Home Contact
त्यस्तै विदेशमा विद्यार्थी पठाउने परामर्शदाता कम्पनीहरुले पाउने मोटो कमिशन स्वदेश भित्र्याउने र त्यसबाट राष्ट्रिय आयमा टेवा पु¥याउने विषय पनि चर्चामा रहनुपर्ने हो तर परामर्शदाताहरुले व्यवसाय संचालन गरेवापत तिर्ने कर बाहेक अरु कर तिर्दैनन् । शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरुलाई अरु बढी जिम्मेवार बनाउन राज्यले स्पष्ट नीति लिनु आवश्यक छ । यसले उनीहरुको जिम्मेवारीबोध बढ्ने र राज्यलाई आयको सबै कर तिरेपछि राज्यको पनि दायित्व बढ्ने हुन्छ ।
अहिले वैदशिक रोजगारी र विदेश अध्ययनका परामर्श र मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने कम्पनीहरुजत्तिको आम्दानी गर्ने अरु कोही छैन । यसर्थ यिनीहरुलाई राज्यले स्पष्ट नीति, नियमभित्र बाँधेर समयानुकूल रुपमा अभि बढ्नेन बाटो खोल्नुपर्छ ।
राज्यको आँखा नपर्ने गर्दा अनेक विकृतिहरु भित्रिएका छन् । विदेशमा विद्यार्थी पठाएर उनीहरु जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको शैलीमा प्रस्तुत हुने गरेका कतिपय घटनाहरु छन् । पछिल्लो समय अध्ययनका सिलसिलामा अस्ट्रेलिया पुगेका नेपालीहरुमा ठूलो पीडा छ । तीन महिना अघि ‘अस्ट्रेलियन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एण्ड टेक्नोलोजी‘ (एआईटिबी)को खारेजीपछि त्यहाँ अध्ययनरत एक हजारभन्दा बढी नेपाली अलपत्र परे । अहिले उनीहरु आफू फसेको भन्दै अरण्य रोदन गरिरहेका छन् । उनीहरुको उद्धार र क्षतिपूर्तिका लागि कसैको पहल छैन ।
गलत परामर्श, स्वदेशप्रतिको अविश्वास अनि अति महत्वकांक्षाका कारण नेपाली युवापिढी यसरी नै फस्दै गएका छन् । सुरुमा आँखा चिम्लेर विदेशिने अनि त्यहाँ समस्या परेपछि स्वदेशले केही गरेन भनेर चिच्याउनेहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । आफूखुसी विदेश पढ्न जानेहरुको कामको ग्यारेन्टी, अध्ययनको ग्यारेन्टी कसको हो ? सरकारको कि आफू स्वयंको ? हो विदेशिएका आफ्ना नागरिकको जिम्मा सरकारले लिनैपर्छ, उनीहरुको सुरक्षाको राष्ट्रकै हो तर स्वयं विद्यार्थी कति जिम्मेवार ? उनीहरुलाई गलत परामर्श दिएर पठाउने शैक्षिक परामर्शदाता कति जिम्मेवार भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नैपर्छ ।
यसका लागि सरकारले नै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । सरकारले वैदेशिक अध्ययनका लग स्पष्ट नीति, नियम र करका प्रावधानहरु राखेर कार्य संचालन गर्न दिने हो भने जिम्मेवारी बढ्नेछ । यहाँबाट जे परामर्श पाइएको थियो त्यस्तो वातावरण नपाएपछि विद्यार्थीहरुमा मानसिक समस्या समेत उत्पन्न हुने गर्दछ । यसमा स्वयं विद्यार्थीहरुको दोष कम छैन । विदेशमा दुःख पाइयो, अलपत्र परियो भन्दै संचार माध्यममाा रोइकराई गर्नेहरुको सख्ंया बढ्दो छ । यसको एउटै कारण भनेको सम्बन्धित पक्षको लापरवाही मात्रै हो ।
दोष सरकार र परामर्शदाता अनि विद्यार्थीको मात्र हैन अभिभावकको पनि हो । उनीहरु छोराछोरीलाई अस्ट्रेलिया वा अमेरिका नपठाए समाजमा इज्जत कम भएको ठान्छन् । आफ्ना सन्तानलाई स्वदेशमै सक्षम बनाएर स्वदेशमै सेवा गर्न लगाउनु जत्तिको स्वाभिमानी र गर्विलो काम केही नहुनुपर्नेमा स्वदेशमा बस्यो भने त नालायक ठहरिने हीन सोचमा हुन्छन् ।
अनि यसैको उपज हो– यहाँबाट आँखा चिम्लेर जाने अनि त्यहाँ पुगेपछि सरकारले हेरेन, दूताबासले हेरेन भनेर रोदन गर्नु कत्तिको जायज ? स्वदेशको अवमूल्यन र विदेशको उच्च मूल्यांकनको परिणाम हो अहिलेको परिणती ! स्वदेशको सबै खराब विदेशी भनेको सबै राम्रो देख्ने संस्कार–संस्कृति हामीमा छ । अरुले बोलेको त्यही कुरा राम्रो आफ्नाले बोलेको वा भनेको त्यही कुरा नराम्रो देख्ने गलत प्रवृत्तिको शिकार नै विदेश पलायनको पहिलो कारण हो ।
सरकार कति दोषी ?
यस्तो स्थिति उत्पन्न हुनुमा सरकारको दोष सबैभन्दा बढी छ । आफ्ना युवाहरुलाई स्वदेशमै बस्ने सामान्य वातावरण तयार छ भनेर भन्न नसक्ने र त्यसका लागि केही गर्न नचाहने सरकारहरुको विगतदेखिको नियतले ४० लाखभन्दा बढी युवा श्रमका लागि विदेशिएका छन् भने दशौं लाख अध्ययनका लागि भन्दै बाहिरिएका छन् । वर्षको १७ अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ अध्ययनका लागि विदेशिन्छ । यस्तो दर्दनाक स्थितिको अन्त्य नहुँदासम्म नेपाली युवाहरु शोषित–पीडित भैरहने र दलालहरु मोटाइरहने क्रम जारी रहन्छ ।
अब सचेत हुनुको विकल्प छैन । अगाडि पहिरो छ भन्ने अन्दाज गरेर पाइला चाल्न सकियो भने मात्रै भीरमा गुल्टिनबाट बचिन्छ हैन भने दुर्नियतिको शिकार निरन्तर बनिरहनुपर्नेछ । ती तमाम युवाहरु जो विदेशमा अलपत्र परेका छन्, असाध्यै दुःख पाएका छन् उनीहरुप्रति गहिरो सहानुभूति प्रकट गर्दै सरकारले उनीहरुलाई यो अवस्थासम्म पु¥याउनेहरुबाट क्षतिपूर्ति दिलाएर स्वदेश फर्कने वातावरण बनाइदिए मुलुककै भलो हुने थियो ।